Daraasad Cusub oo Daahrogtay Cidda Hurdo Badan “Ragga iyo Dumarka” – Beegsonews-Wararka maanta
Home XOGAHA DUNIDA Daraasad Cusub oo Daahrogtay Cidda Hurdo Badan “Ragga iyo Dumarka”
Guri ma jiro illaa lamaanaha ku nool waxey ku muran san yihiin qofka hurdada ugu fiican hela, mid walbaa waxa uu aaminsan yahay inaanuu dhadhamin raaxada hurdadu waxa ay tahay marka loo barbardhigo dhinaca kale oo uu ku tuhunsan yahay in hurdada ugu fiican uu helo.
Hadaba, dhawaan ayaa cilmibaarayaal ay isku dayeen iney arrintan go’aan ka gaaraan yaa hurdo badan ragga iyo dumarka, waxey sameeyay daraasad si ay u ogaadaan saacadaha ay raggu hurdaan habeenkii iyo waqtiga ay maalintii qayluushadaan, marka loo barbardhigo dumarka.
Daraasaddan ayaa lagu daahrogay in 13% raggu ay seexdaan duhurkii oo ay qaluushadaan, halka dumarka 6% ay sidaa si la mid ah sameeyaan oo ay qaluushadaan.
Daraasaddan oo ay daabacday jariidada Daily Mail ee dalka Ingiriiska ka soo baxda, ayaa lagu ogaadaan in afar meelood oo meel dumarka ka mid ah aaney noloshooda helin qaluulasho, marka loo barbardhigo ragga oo 16% ayna helin wax qaluulasho ah noloshooda, markaa halkan waxaa hurdo badan ragga.
Liza Artis, oo ah khabiir ka tirsan mac’hadka hurdada ee dalka Ingiriiska ayaa waxey tiri, “In qofku uu seexdo 20 illaa 30-daqiiqo maalintii wey ku filan tahay inuu helo nasasho oo dareemihiisu ay ku dagaan si mar kale uu firfircooni u helo, halka baraarugana uu ku xoogeysto qaluulashaa yar.
Waxey intaa ku dartay: “Waqti kasta oo intaa ka dheer waxaad ku galeysa hurdo dheer oo marka aad ka soo kacdo aad ku dareemayso caajis iyo hamaansi.”
Previous articleFilibiin oo xaalad deg deg ah la geliyay
Next articleKumaandooska Somalia Oo Ka Hadlay Dagaal Ka Dhacay Degmada Awdheegle Ee Gobolka Sh/Hoose
‘Gabadha adduunka ugu timaha badan oo ku leh Timaha meel walba...